Rakkinaa fi Salphina Abbaan Filate! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsRakkinaa fi Salphina Abbaan Filate!
Rakkinaa fi Salphina Abbaan Filate!
Damee Boruutin, Bitootessa 7, 2019
Ajajjamtuu OPDO mee laalaa. Kalee WBO hiikkachiiftu, hardha ammo Qeerroo fakkaatuu, boru Qeerroo hiisisuuftuu. OPDOn qabsoo Oromoo bacancaruuf tattaafi godhaa jirtu keessaa tokko, xawalwaaleewan deeggartuu fakkeessanii basaasu dha. Salphina OPDO
Yaa Uummata Oromoo jala muree waliif haa himnu. Kan rakkinaa fi salphina bara baraa keessa jiraachuu filate nuyi. Namni nuuf gadduu fi nuu dirmatus hin jiru. OPDO jawwee guddaa summii tufaa deemu mataa irratti baanee dhumaatii ijoollee keenyaaf boonya. Amma OPDOn jirtu rakkinni, salphinnii, dhumaatii fi booyyichi qama keenya taha. Jireenya fokkisaa kana dhaloota booruuf dhaala dabarsinee darbuu caalaa kana nama qaanessu hin jiru.
Uummatni Oromoo TPLF duraa OPDO of irraa buqqisuu qaba ture. TPLF of irraa buqqisee ergamtuu TPLF mataa isaatti ol baasee baate taa’uu uummata keenyatu filate. Kanaaf kan sababa tahe akka hubannaa koo yoo tahe dhiiba midiyaan bara kana qabsoo uummataa irratti qabu dha. Uummata Oromoo kan afanfajjesse OMN waan tahee Jawaar uummata isaa ifatti dhiifama guddaa gaafachuu qaba. “Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Har’a bilisoomnee jirra. Mootummaa kana wajjin tasgabbiin ce’uu qabna” jedhan midiyaan dogongora uumuun dhiiga guddatuu ilmaan Oromoo dhangala’e bilaasha gochuu dha.
The purpose of Jawar Mohammed’s demonstration, under personal protection by OPDO armed security guards, in Koyyee Faccee with Qeerroo, today, is to hijack the Qeerroo struggle once again as he successfully did in August 2016. Many Qeerroo sustained heavy casualty, in a single day demonstration in the August 2016, falling into Jawar’s machinery designed by OPDO. Fool me once you are stupid, fool me twice I am stupid. Qeerroo wake up!!
Jijiiramni OPDOn goote qubee P fi D wal dabrsuun maqaa jijjirachuu dha. Hojii ishee otontoraa fi bututaa sana akkuma durii itti fuftee jirti. Uummata Oromoo gowwomstee gurgurachuun umurii ishee kana guutuu jiraatte. Uummatni Oromoo OPDOf aangoo biyyaa bulchuu laachuu miti maaliif guyyaa tokko akka isa irra bultu ayyaana akka kennuuf nama hin galu. Kan ilmaan isaa hidhaa fi ajjeessaa ture OPDO. Kan lafa Oromoo gurgurachaa ture OPDO. Kaleessaa kan biyya bulchaa jiru Wayyee waan tureef waan hundaaf Wayyaanee abaaruun of gowwomsina. Har’a gaafa OPDOn mootummaa dhuunfate nuu darbee? Ijoolleen keenya nagaan baatee galaa jirti? Qabeenya keenya irratti abbaa taanee jirra? Har’as bara Wayyaanee caalaa ijoolleen keenya hidhmaa, ajjeefamaa jirti. Qabeenya keenya miti, magaala keenyaa fi biyya keenya iyyuu duuchaan gurguramaa jira.
Mootummaan Wayyaanee “master plan” Finfinnee waraqaan baafata. Mootummaan OPDO “master plan” Finfinnee lafa irratti hojii ragaasisa jira. Hojiin OPDO baayyee nama guba. Hojii qaanii fi hojii salphina akkasii takkaa argamee hin beeku. Hooggantoonni OPDO maraatanii namumaa keessaa bahanii waan jiran fakkaatu. Dhiiga qulqulluu qarroo ilmaan Oromoo dhangalaasaa turanitu mataa isaan galglshaa jira.
Barsiisaa Qanasisaa Ragaasaa mana hidhaa keessatti daramee qaamni isaa laamsha’ee dheengada boqotuu isaa midiyaan dabarsee jira. Barsiisa Qanasiisaan kaleessa bakka dhaloota Sibuu Sirretti akka kabjaa guddaan owwaalli isaa rawwatamees himameera. Barsiisaa Qanasiisaan fakkeenya qaqqalii ilmaan Oromoo kumaata haqa uummata isaanii aarsaa tahan ti. Lubbuun isaanii Janata haa seenuu. Seenaa fi uummatni isaanii bara baraan isaan yaadata. Garuu dararama isaa kana wajjin kanan kaasu barbaadutu jira.
Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaniif kan itti gaafatamu nama Wayyaanee Geetachoo Asfaaa jedhamu akka tahetti himama. Geetachoo Asfaa Barsiisaa Qanansiisaan qabsawwaa Oromoo tahuu isaa miti dhalachuu isaa iyyuu beekuu hin danda’u. Kan eenyummaa isaa bareechee beeku nagaa eegduu Wayyaanee kan achitti dhalatee guddate Lammaa Magrsaa ykn immoo OPDO warra hojii Lammaa Magrsaa hojjetan akka tahe dagachuu hin qabnu. Madaan uummatni Oromoo qabu madaa OPDO akka tahe wal nama hin falmsiisu.
“Master plan” Finfinnee uummatni Oromoo ilmaan isaa lattuu kuma shanii ol aarsaa godhee kan hanbifate se’a. OPDOn garuu karaa mana dubaa seentee konduminyoomii qotee bulaa Oromoo iraa buqqiste ijaarte Habashootaaf akka caati raabsaa jirti. Wayyaannee waan Oromoo qabu achumatti araabaa baate. OPDOn garuu lafaa, magaalaa fi biyyaa Oromoo hundee irraa kaaftee gurgurachaa jirti. Kanaafuu yaa Uummata Oromoo OPDO ofii irraa kaasuu malee filmaata biraa hin qabnu.
Teenyee boo’uun nuu haa gahu. Qabsoon Uummatni Oromoo OPDO wajjin godhu kan guyyaa muraasaa ti. Bakka jirru maratti hojii OPDO lagachuu. Ajajaa fi dirqamaa OPDO jalaa bilisa of gochuu. Karaa nagaa taheen hiriira bahu fi gabaa lagachuun diddaa keenya mul’isuu. Warri naannoo WBOn socho’u jirru WBOf gummaachuu. Sabaa fi sab lammii akkuma keenya mootummaa kana wajjin rakkina qaban akka uummata keenya wajjin dhaabbatan hawwachuu. Tibbana Qeerroon hamma Uummatni Oromoo hirree isaa ofiin murteefatu qabsoo irraa dhaabbachuu hin qabu. Garbummaan nuun haa raawwatu.
Lafti Teenya Lafee Teenya – Hiriira mormi – Oromiyaa Guututi Guyyaa Hardhaa ta’aa jira
DHAAMSA HADARAA HUNDAAF: Hiriirra eegalme haga jijjiirraa hundee fidutti dhaabbachuu hin qabu.